Gu Gu's Cyber Sandbox: Vista: Day6- How to install Zawgyi keyboard
Vista: Day6- How to install Zawgyi keyboard
Today, my favorite Native Myanmar is down. So I don't know what to do (kind of lost) and end up adding more programs on my Vista. Ever since I got Vista installed, I have not installed the Zawgyi keyboard, which I need to use to write some stuff here. It took meawhile to remember what I did for Zawgyi keyboard installation in Windows XP. So I decided to write this little how to article to help beginners.
၁။ ZawgyiKB_installer_I.zip ကို ဒီမှာ download လုပ်ပါ။ ပြီးရင်တော့ zip file ကို WinZip သို့ WinRAR သုံးပြီးဖွင့်ပါ။
၂။ ZawgyiKB.exe ဆိုတဲ့ program ကို run လိုက်ရင် ဇော်ဂျီကီးဘုတ်ကို install လုပ်ပြီး ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ ပထမဦးဆုံးကတော့ Taskbar မှာ ဘာကီးဘုတ်မှ တွေ့ရမည်မဟုတ်ပါ။
၃။ Start ကိုနှိပ်ပြီး Control Panel ကို ဖွင့်ပါ။ ပြီးလျှင် Regional and Language Options ကို ဖွင့်ပါ။
၄။ Keyboards and Languages ဆိုသော tab ကို နှိပ်ပြီး Change keyboards ဆိုတာကို နှိပ်ပါ။ Text Services and Input Languages ဆိုသော window တစ်ခု ထပ်ပွင့်လာပါလိမ့်မယ်။
၅။ Add ကို နှိပ်လိုက်လျှင် ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်း Add Input Language ဆိုသော window တစ်ခု ထပ်ပွင့်လာပါမယ်။ English (United States) ဆိုတဲ့ နေရာထိ ရောက်အောင်သွားပြီး Zawgyi Myanmar Unicode Keyboard ဆိုတာကို ရွေးလိုက်ပါ။
၆။ ပြီးလျှင် အကုန်လုံးကို OK နှိပ်ပြီး ပိတ်လိုက်ပါ။ Taskbar မှာ ကီးဘုတ်ပုံငယ်လေး ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ ဇော်ဂျီကီးဘုတ်ကို စတင်အသုံးပြုနိုင်ပါပြီ။
Posted by Gu Gu at 1:22 AM